‘मंगलम’ प्रोमो रिलिज, जान्नुस् कसको क्यारेक्टर के ? « Ramailo छ
‘मंगलम’ प्रोमो रिलिज, जान्नुस् कसको क्यारेक्टर के ?
छविराज प्रोडक्सनको फिल्म ‘मंगलम’ को प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । प्रोमोमा नायिका शिल्पा पोखरेलदेखि साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह सम्म समावेश छन् । नवल नेपाल निर्देशित साढे दुई मिनेट लामो प्रोमोले फिल्म पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित हुन सक्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । प्रोमो हेर्नुस् :
प्रोमोमा नायक पुष्प खड्काको दुई रुपलाई देख्न सकिन्छ । पुष्प लभर व्वोय हुँदै ह्व्लि चियरसम्म पुगेका छन् । यस्तै शिल्पालाई एक विवाहित नारीको भूमिकामा छिन् । अर्का नायक पृथ्वीराज प्रसाईंलाई शिल्पाको पछि लागिरहेको देख्न सकिन्छ । वरिष्ठ अभिनेता नीर शाह र अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई पनि प्रोमोमा स्थान दिइएको छ । बुझिए अनुसार फिल्मको कथाको सुरुवात र अन्त्य साम्राज्ञी बाटै हुनेछ ।
शिल्पा पोखरेल पहिलो पटक निर्माताको रुपमा रहेको ‘मंगलम’ फागुन २५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मको पर्ख पर्ख मायालु बोलको गीत हिट भैसकेको छ । शिल्पा, पुष्प र पृथ्पीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :